La Liigaa Ispeenitti Maadriid, Baarseloona fi At. Maadriid injifatan. Messiin rikoordii haarawa galmmeessise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii La Liigaa Ispeenitti Maadriid, Baarseloona fi At. Maadriid injifatan. Messiin rikoordii haarawa...
La Liigaa Ispeenitti Maadriid, Baarseloona fi At. Maadriid injifatan. Messiin rikoordii haarawa galmmeessise
FC Baarseloonaan tapha isaa torbaan kanaa goolii 5 – 1 morkataa isaa garee Siviyyaa qaanfachiise. Tapha kana irratti Li’ooneel Messiin goolii 3, Neymaar 1, akkasums taphataan Raakitich goolii daqiiqaa 65 irratti galchuu danda’eera. Gooliin kaleessa Liyoon galche rikoordii La Ligaa woggaa dheeraadhaaf qabamee ture akka cabsu isa dandeessisee jira.
Gooliin Li’ooneel Messii Baarseloonaa muummee gabatee La Liigaa irra baasuu dhabus, Liyoon rikoordii goolii La Liigaa erga bara 1955 as hincabne akk cabu isa taasiseera. Liyoon rikordii goolii 251 woggaa 59 namni uggu dhabame guyyaa kaleessaa cabse. Rikoordiin kuni rikoordii goolii taphataan tokko yeroo La Ligaa Ispeenitti tapahtu qabate ture. Rikoordichi kaleessa cabe rikordii Telmoon Zarraan, taphataa Atleetik Bilbaa’oo, ture. Telmoon Zarraan biyya Ispeenitti tapha 278 taphateeti goolii 251 kan kiyyoo keessa marmaarse. Messiin tapha 289, bara 2004 eegalee, taphachuuf dirqame rikoordii kana fooyyessuudhaaf. Li’yoon waa’ee rikoordicha cabsuu yoo dubbatu, ‘Rikoordii nicabsaa jedhee takkaa, takkkaa, yaadee hinbeeku,’ jedha. Li’yoof wanti dirree kubbaa miilaa irratti hindanda’amne hinjiru. Kanuma mirkaneesse, kaleessas.
Gama birootiin tapha garee Riyaal Maadriidii fi Iibar jiddutti ta’een gareen Maadriid 4 – 0 Iibar irratti injifannoo argachuu danda’eera. Garee Maadriidiif goolii kan kiyyoo keessa marmarsan Jaams Rodriigeez (daq. 23), Ronaaldoo (daq. 43 fi 83 ) fi Kariim Benzemaa (daq. 69) turan. Injifannoon kuni Riyaal Maadriid wolitti aansee tapha 14 akka injifatu isa taasiseera. Gareen Riyaal Maadriid leenjisaa Kaarloo Anchelootii jalatti tapha 50 taphatee 36 injifate.
Bifuma wolfakkaatuun tapha Atleetikoo Maadriid fi Maalaagaa jiddutti guyyaa kaleessaa geggeeffameen At. Maadriid 3- 1 injifate.
Tapha torbaan kana geggeeffameen jijjirraan muummee gabatee La Liigaa irratti ta’e hinjiru. Riyaal Maadriid, Baarceloonaa fi Atleetikoo Maadriid wolduraa duubaan qabxii 30, 28 fi 26 La Liigaa hoogganu. Gabatee goolii Ronaaldoon 20, Neymaar 11 fi Meessiin 10 hoogganan.
Gama Seeri’aa Xaaliyaaniitti, derbiin Miilaan 1 – 1 xumurame. Tapha garee biroo jidutti ta’een Roomaan 2 – 1 Atlaantaa moo’ate, Juveentus 3 – 0 Laaziyoo injifate.
Previous articleUmmanni kanneen Hannaa ajjeesan seeraaf akka dhihaatan gaafachuu itti fufe
Next articleItoophiyatti gufuuleen brokraasii sochii daldalaa danqaa jiru jedha Baankiin Addunyaa